Al-shabaab oo lug iyo gacan jartay | KEYDMEDIA ONLINE
Al-shabaab oo lug iyo gacan jartay
MUQDISHO(KEYDMEDIA) Al-shabaab ayaa fal lug iyo gacan goyn ah ka fulisay xaafada calamada ee duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaa Alshabaab ay wiilka Dhalinyarada ku eedeeyeen inuu dhac ka geystay Mid ka mid ah wadooyinka Gobalka Shabeelaha Hoose Sida Alshabaab ay hadalka u dhigeen.
Arinta Layaabka leh ayaa maanta Noqotay ka dib markii Alshabaab ay dad weyne badan ay ka soo qasbeen deegaanada Gobalka Shabeelaha Hoose sida Afgooye iyo deegaanada ku dhowdhow waxaana uu xukunka ka dhacay deegaanka Calamada ee duleedka Muqdisho.
Sidoo kale ALshabaab ayaa sheegay in dadka qasab ay ku keeneen deegaanka islamarkaana dadka ay u diideen inay dhaqaaqaan ka dib markii qaar kamid ah dadka ay u adkeysan waayeen dhiiga ka baxay Wiilka Dhalinyarada islamarkaana ay sababtay in qaarkood goobta ay ku matagaan.
Ciidamo ka tirsan Alshabaab ayaa la sheegay in dadka ay ku qasbeen inaysan ka bixin ama ka dhaqaaqin Goobta falka uu ka dhacayo waxaana taas ay sababtay in qaar ka mid ah dadka oo goobta ka baxsaday Qori caaridiis lagu soo celiyo.
Ugu Dambeyntii Gudoomiyaha Maxkamada Alshabaab ee Deegaanka Calamada ayaa waxa uu dadweynaha u sheegay eray ay ku caanbaxen Alshabaab saraakiishooda oo ah Asiga ayaa qirtay sidaasi ayuu Maxamed Sheikh Axmed ku wayay Lugtiisi Bidix iyo Gacantiisa Midig.